China Dongshen okomoko dị nro anụ ahụ enyi ewu ntutu osisi ejiri aka ọkachamara etemeete ahịhịa setịpụrụ onye nrụpụta na ndị na-ebubata ya Dongmei
Dongshen ọhụrụ imewe etemeete ...
Ihe ntutu isi ihe sịntetik ihe onwunwe osisi ma ọ bụ ihe ọzọ kwekọrọ ...
Dongshen okomoko adụ akpụkpọ-f ...
Ojiji nke etemeete etemeete: ahịhịa ntụ ntụ na -eteghị ete: etemeete ntụ ntụ ahụ nwere ahịhịa nwere s ...
Okomoko ewu ntutu ịchọ mma b ...
- Nhazi zuru oke nke 15pcs brushes ọkachamara ọkachamara, mara mma niile ...
Dongshen okomoko dị nro akpụkpọ ahụ enyi ewu ntutu osisi aka ọkachamara etemeete ahịhịa set
Ejiri ajị anụ etemeete ọkachamara 15pcs mee ajị ewu, ọla kọpa na aka osisi. Ntutu ewu dị nro na -adịkwa larịị, nweekwa ntụ ntụ siri ike. Ụdị njikwa aka dị elu bụ nke na-anaghị amị amị, njigide siri ike, ọ gaghịkwa enwe ike ọgwụgwụ mgbe ejiri ya mee ogologo oge. Nhọrọ kacha mma maka ndị na -ese etemeete!
Ojiji nke ahịhịa etemeete:
Loose ntụ ntụ: Ngosiputa ntụ ntụ ehichapịara nwere ihe na -esi ísì ụtọ, ihu etemeete na -adịkwa ọcha ma na -adịgide.
Concealer ahịhịa: Isi ahịhịa dị mma nwere ike ịchacha ebe ndị siri ike iru, yana mmetụta ịzobe ihe na-adịkarị otu na eke.
Ahịhịa ahịhịa: Jiri ntụpọ eke, jiri ndò na -agwakọta, na -egosipụta ọdịdị ihu ihu n'ụzọ zuru oke.
Eyeshadow ahịhịa: Ụdị dịgasị iche iche. Ekwesịrị ịkwadebe brushes anya anya nke nha dị iche iche iji kwekọọ n'ụzọ dị iche iche na -atụgharị anya.
Nku nku anya: Site na uzuzu nkuanya, ọ nwere ike ịbịaru ụdị nku anya nke mara mma. Ọ dị mfe ijikwa ike na ndo karịa pensụl nkuanya.
Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ: Kpọpụta nke ọma ụdị egbugbere ọnụ, mee ka egbugbere ọnụ jupụta ma nwekwaa otu, na -adịtekwa aka.
Ntọala ntọala: Ejiri iji tinye ntọala mmiri mmiri, ihe achọrọ maka ahịhịa na ntọala mmiri mmiri dị elu.
Brush contour ihu: Njirimara ya bụ na isi ahịhịa bụ 45 Celsius, nha ya na ahịhịa ịchafụ, na bristles siri ike.
Ntutu mikuku Ntutu ewu, ntutu sịntetik
Mikuku Osisi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dịka mkpa onye ahịa si dị
Agba Omenala, dịka arịrịọ onye ahịa
Atụmatụ Na -adịgide adịgide, Dị nro, Ahụike
Agba na nha maka ntutu ferrule na aka Enwere ike ịhazi ya
Nkwakọ ngwaahịa Anyị nwere ike ịmere gị nkwakọ ngwaahịa ahaziri iche, ebe anyị na -emere gị naanị akpa opp n'efu.
Ịlele Free ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Oge ndu maka imepụta oke Site na ụbọchị 35 ruo 45
Ịkwụ ụgwọ T/T, L/C, Paypal, Western, wdg.
- A zuru ezu mma Setịpụrụ nke brushes etemeete ọkachamara, a na -egosi ha niile nke ọma na ahịhịa ahịhịa mara mma maka idobe brushes gị n'aka, n'ụlọ ma ọ bụ mgbe ị na -eme njem.
- NRỤ NA Ọ BỤGHỊ ECHICHE EBE: Ntutu ewu dị okomoko, dị nro na silky ka emetụ ya aka, ajị ajị dị elu anaghị awụsa, ebe ọ na-adịkwa nro na hypoallergenic dabara na ụdị anụ ahụ dị nro. na obi ike.
- EGO dị elu dị elu:Na àgwà osisi na ferrule na Nchikota. Ọkụ na ntụsara ahụ, n'agbanyeghị ogologo oge ị na -eji ahịhịa, ike agaghị agwụ gị. Na-enweghị mmịfe, njigide siri ike, ị nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na brushes etemeete dị iche iche, na-enye gị ahụmịhe ngwaahịa kacha mma.
- Onyinye zuru oke: Ị gaghị echetụ n'echiche ihe nchacha etemeete etemeete a bụ nke ụmụ nwanyị na -ewu ewu. Ma enyere ya onwe gị ma ọ bụ dị ka onyinye nye ndị enyi nwanyị gị, ọ ga -eme ka ndị mmadụ tie mkpu, ụmụ nwanyị niile chọrọ ịma mma Ọ bara uru ụdị onyinye a dị oke ọnụ ahịa.
- Ntucha etemeete Dongshen nwere ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe bara ụba ma na-agba mbọ inye ndị ahịa ngwaahịa dị elu, Inweta chepụta ngwaahịa mara mma, ịnụ site na ọtụtụ ndị ahịa nwere obi ụtọ na-eme ka ọ dị ụtọ karịa!
Nke gara aga: Dongshen etemeete ahịhịa vegan enyi na enyi nro sịntetik ntutu oroma osisi aka etemeete ahịhịa set
Osote: Onye na-ahazi etemeete etemeete akpa Ọka nka na-eme njem akpa akpa guzoro ọtọ etemeete iko mmiri anaghị egbochi uzuzu na-egosi ahịhịa akpa nchekwa akpa.
Nhazi ahịhịa kacha mma
Nhazi etemeete omenala
Nhazi etemeete ihu Ntọala
Onye na -emepụta ahịhịa ahịhịa
Ngosi etemeete etebe okomoko
Label nkeonwe Ncha etemeete
Ngwa etemeete etemeete na -ere ahịa
Dongshen omenala onwe labelụ N'ogbe vegan c ...
Dongshen ọkachamara etemeete ahịhịa set etemeete t ...
Dongshen ahịhịa retractable Kabuki etemeete ahịhịa ...
Dongshen okomoko eke ewu ntutu etemeete ntụ ntụ ...
7pcs aja aja vegan sịntetik ntutu nwa handle mi ...
Elu àgwà akpụkpọ-enyi na enyi eriri sịntetik ntutu ...
Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Mee Ncha, Nịm etemeete ahịhịa, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ,